5 SEO Secrets kusuka Semalt Ukuze Phambi Kwabanomncintiswano
Uhlelo lwebhizinisi lomhlaba wonke luye lwaba njalo ngempi kulabo abanakhoisisindo esinamandla nesimo sezimali. Izitatimende zamanje, noma kunjalo, zixhuma ensimini zivumela amafemu embonini efanayo emhlabeni wonke ukuba ancintisanekwezinye izikali ngaphandle kwesayizi nokusikeka kwezezimali. Izinto zokumaketha ziye zenza ama-digital platforms ezivumela izinkampani ukuba zifikeukufaka amanetha ngaphesheya kwesikhala esiphezulu se-intanethi.
Injini Yokusesha Injini (SEO) ijikezele indawo ngokwayo njengamandlaithuluzi lokungqubuzana nabanye kuphela kodwa nokudonsa phambili. Ukwahlukana phakathi kwe-SEO ukwamukelwa kanye nomkhuba wendabuko kuninginjengobusuku nemini - autosalongi keemiline puhastus tallinn airport.
Ivan Konovalov, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivimenti, uxoxe ngamasu ayisihlanu okuhlala phambili komncintiswano ngenkathi usebenzisa amathuluzi we-SEO.
Kuwo wonke umncintiswano, umuntu kufanele ahlole ukuthi ubani olwa nalo. Kumelefunda umsebenzi wabo, irekhodi, amasu, amandla kanye nokubuthakathaka. Emibhalweni ye-SEO, kufanele uhloniphe idumela lawo ngaphandleUkwengeza kokuqhuba ukusesha kwangemuva ukucacisa isikhundla sabo ngokuphathelene neyabo. Ukufunda umncintiswano wakho kuwukuhlaziya kuphelakanye namaqhinga okudinga ukuthi uhlele iqembu elizinikezele kumncintiswano wokuhlola isikhombisa nsuku zonke. Wonke lawa maqhinga akuvumela ukuba ulinganiseukusebenza kwakho nokuveza ngokuthakazelisayo hhayi kuphela lokho abancintisana nabo abakwenzayo kodwa nokuthi bangabani. Ngakho-ke, ibhizinisi lakhoingasebenzisa ulwazi oluningi kakhulu ekuhloliseni umncintiswano ngakho-ke uhlale phambili.
2..Ukukhethwa kwegama elingukhiye
Lesi yisisekelo sokuhlanganiswa kwe-SEO ephumelelayo. Kumelwe ube nokufanelekanye namagama angukhiye anele ekukhethweni ngokusekelwe kuphando lomsebenzi wokusesha umthengi. Ngesikhathi usebenzisa i-Google analytics, ungawi ukuqinisekiswayamagama angukhiye aphezulu. Kunalokho, khetha izinhlanganisela zamagama angukhiye akwazi ukunikeza ithrafikhi ephakeme kakhulu futhi usezingeni lemiphumela yokusesha ngaphakathiimboni yakho. Buyekeza amagama akho angukhiye ngezikhathi ezithile bese usebenzisa i-Google Analytics ukuqinisekisa ukufaneleka nokusebenza kwamagama angukhiye. Lokhuukujwayela kukunika amandla okuzivumela ukuvumela ibhizinisi lakho ukuthi livune imivuzo yokuba phambili komncintiswano ngokuhamba kwesikhathi.
3. Akukho ukungahambisani nokuqukethwe
Ekukhangiseni kwe-SEO, okuqukethwe kunjalo futhi kuzohlala kube yinkosi. Amawebhusayithi adumile nokuseshwaizinjini ezifana ne-Google zithatha futhi zishicilele okuqukethwe kwekhwalithi ehlukile. Ngenxa yalokho, okuqukethwe kwakho kuwebhusayithi kufanele kuhlangabezane nalezi zindinganiso eziphezuluukwandisa amathuba akho wokuthola simo esiphakeme kwimibandela yokusesha. Kunomphumela we-domino wokuqukethwe kwe-SEO yekhwalithi kwi-website usezingeni.Amawebhusayithi anamuhla asebenzisa izindlela zokuqabula okwenziwe ukuthi ulimi olusetshenzisiwe luhlukile emva kwesikhathi sokukhula kokhulaUkuthengwa kwe-monotony kugcina nokugcina umsebenzi kusayithi.
4. Hlola ama-Backlinks
Le ndlela esebenzayo isebenza kahle ekukhipheni okuqukethwe okungenasiphelo okungenzeka kube nokulimalaidumela lakho le-intanethi. Izixhumanisi zangemuva zivumela ukuthi uvele kumaforamu nakwebhusayithi yevakashi enokuqukethwe okusha, ikhwalithi nokuhle. Lokhuiphuzu lokuqala lokuhlola wonke okuqukethwe okuhlobene newebhusayithi yakho eyinhloko. Ukuze uqhubeke nomncintiswano, i-SEO ifuna amafemu aqaphe futhihlela amasu wokuxhumanisa emuva.
Kumele ugcine ukuvumelana kokulayisha okuqukethwe kwekhwalithi okubalulekileebhizinisini lakho noma embonini futhi ekhangayo kumkhakha wamakethe okuhlosiwe. Ukuntuleka komsebenzi kubiza i-SEO rankings yakho futhi kunganciphisaisikhundla somuntu emakethe.